အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Ninjastrikers - ဝီကီပီးဒီးယား
မော်ကွန်း ၁ မော်ကွန်း ၂ မော်ကွန်း ၃
၁ How we will see unregistered users
၆ january 20, 2022
၇ Undetailed section
၁၁ Your opinion
၁၂ Infobox country
၁၄ Revdel req
၁၅ Movement Strategy and Governance News – Issue 5
၁၆ File:Flag of Naypyidaw Union Territory.svg
၁၇ Movement Strategy and Governance News – Issue 6
၁၈ Template request
၁၉ A barnstar for you!
၂၀ Wikisource request
မဂ်လာပါဗျ ဒီနေ့ နေ့ခင်းတုန်း က အဂ်လိပ်ဘက်က bf 109 ကို ဘီအက်ဖ် ၁၀၉ ဆိုပြီးဘာသာပြန်လိုက်တာ ဘရို သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဗားရှင်းကို ကျနော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အဂ်လိပ်ဘက်က ကိုးကားလင့်ခ်ကို မြန်မာဘက်ကို ပြောင်းချိန်မှာ ပြဿနာ ရှိနေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့တာကို ကျနော် ပြန်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဘရို့ အနေနဲ့ ဖျက်ပေးနိုင် မလား။ Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၄:၃၁၊ ၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဖျက်လိုက်ပါပြီ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၃၉၊ ၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကျနော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေ ဖြစ်တဲ့ အက် ၁၈ နဲ့ လီ အန်ဖီး ရိုင်ဖယ် ဆောင်းပါးတွေမှာလဲ ဘာသာပြန်တဲ့ အချိန်မှာ လင့်ခ်တွေမှားတာအပါအဝင် လိုအပ်ချက်တွေက အရမ်းများနေပါတယ်ဗျ။
အဲ့တာတွေကိဘည်း ပြန်လုပ်ချင်တယ်။ အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် ဖျက်ပေးပါ။ Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၄:၅၆၊ ၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မဂ်လာပါဗျ ကျနော် အက်ဖ်/အေ-၁၈ စူပါဟောနက် ကို ဘာသာပြန်လိုက်တာကို ဘရို သိမယ် လို မျှော်လင့်ပါတယ်၊၊ ဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း မြန်မာ wikipedia ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ လင့်ခ်တွေက ပြသနာ တက်နေပါတယ်။ ဘရို ပြင်တတ်တယ် ဆိုရင် ပြင်ပေးပါဗျာ။ Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၁:၃၀၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)Editor in Myanmar[အကြောင်းပြန်ရန်]
ပြင်လိုက်ပါပြီ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၇:၅၂၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဖျက်မပစ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ ကောင်းသူ (ဆွေးနွေး) ၁၈:၁၄၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@ကောင်းသူ ခိုင်လုံတဲ့ စိစစ်အတည်ပြုနိုင်တဲ့ ကိုးကားတွေ မပါတဲ့ ဆောင်းပါးတွေဖြစ်တာရယ်၊ စွယ်စုံကျမ်းမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် ထင်ရှားအရေးပါမှု မရှိတာကြောင့် ဖျက်ပစ်ရတာပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၁၆၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ထိပ်တင်ကောင်းရွှေအေး ဆောင်းပါးက Autobiography လို့လဲ သံသယရှိပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ဆောင်းပါးရေးတာမျိုးကို အားမပေးပါဘူးဗျာ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၁၉၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Hey bro I add General Aung San as the first commander in chief of the military in မြန်မာ့ ပထမဆုံးများ but there wasaproblem. Please fix it Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၃:၀၅၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Done Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၁၁၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
january 20, 2022[ပြင်ဆင်ရန်]
I think those crimes should be in Min Aung Hlaing article because he's the most responsible General for these cases. Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၀၂:၅၇၊ ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Editor in Myanmar: As this is an article about Min Aung Hlaing, the detailed crimes done by his soldier should not be included. လူမျိုးတုန်း_သတ်ဖြတ်မှုနှင့်_စစ်ရာဇဝတ်မှုဟု_စွပ်စွဲခံရမှုများ section seems good enough. Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၅၅၊ ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
how about undetailed section?
His soldiers can do those things without his order.
Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၀၃:၅၉၊ ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
I agree that detailed about Min Aung Hlaing's crimes is not needed but I think the undetailed that I added is needed because he's the most responsible officer for those crimes. Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၀၄:၄၇၊ ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဒါနဲ့ အကိုးအကားက မနည်းပါဘူးဗျာ။
တစ်မှုခြင်းစီ အတွက် လင့်ခ်တွေ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၀၄:၄၉၊ ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Bro ရေ ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ် မှ ကျနော် edit အကုန်ပြီးတဲ့ အထိစောင့်ပေးပါ။ ကျနော့်ရဲ့ တချို့ edit တွေဟာ NPOV နဲ့ ဆန့်ကျင်နေကြောင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် စာအချောသတ်နေတုန်း bro က ကြားထဲ ဝင်ပြင်လိုက်ရင် အစက ပြန်ရေးနေရလို့ပါ။
Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၀၈:၂၄၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Noted! Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၁၄၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Hey bro. Thanks for not acknowledging my request. I've finished editing to read better now. 🤗🤗🤗🤗
Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၀:၀၂၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thank you so much for improving the article. Ninja✮Strikers «☎» ၁၇:၅၉၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Bro ရေ ညနေက ကျနော် edit လုပ်နေတုန်း ကျနော် ညီဝမ်းကွဲ အိမ်ကို ခဏလာတယ်။ ကျနော်ကလည်း computer screen ကို edit ရင်းတန်းလန်းနဲ့ ထားခဲ့မိတယ်ဗျ။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော် edit ထားတာတွေကို တစ်ချက်လောက် စစ်ပေးပါ။ ဒီကောင်က ပြုံးစိစိနဲ့ မေးတော့လဲ မဖြေဘူးဆိုတော့ တစ်ခုခု လုပ်သွားတယ် ထင်တယ်။ 🤔 ပေါက်တတ်ကရတွေ ဝင်ရေးသွားမှာ စိုးလို့ပါ။ (အစ က တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စစ်မလို့ပဲ။ online ကျောင်းက assignment တွေ ပုံနေလို့ဗျ။)
Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၃:၁၆၊ ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
You can check your contribution history via here. Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၂၈၊ ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Ninjastrikers တွေ့ပြီ bro ရေ
၂၀၁၅ ကိုးကန့်စစ်ပွဲကို edit ရင်း တန်းလန်းကြီး ထားခဲ့တုန်း သူက မသိမသာရေးသွားတာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီကောင်ဘာရေးသွားလဲဆိုပြီး recent change မှာ ရှာတော့ မတွေ့တာ။ တော်တော် လည်တဲ့ကောင် 😅
Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၅:၁၅၊ ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
If you'll see here, I asked what to do about articles I created that should be deleted and rewritten. Lady and the Tramp II: Scamp's Adventure is one, and the other is Fun and Fancy Free. Also, @Martorellpedro:, I wanted the articles I wrote deleted so that they can be recreated better. Martorellpedro would have made them both better. However, for retained titles he made, like Lady and the Tramp, Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure, and Teletubbies, what should they be called? I know that Teletubbies probably can't be translated, but shouldn't it be transliterated? Also, the only reason to decline deletion of the articles I wrote is if they can be improved. They need to be better. If this wiki is supposed to be like Thai wiki, then Lady and the Tramp II: Scamp's Adventure should look like the Thai page. There is notaThai page yet about Fun and Fancy Free, as well as other Disney movies of that time like Saludos Amigos and The Three Caballeros. Which should exist first? I guess Thai, but I'm asking Martorellpedro to write it. Meanwhile, what should "The Rescuers Down Under" be called in mywiki? I believe it too should exist in Thai wiki, but I can't write it. Can you, Martorellpedro? 2600:1700:53F0:AD70:7817:2DF7:EF56:A2CE ၂၃:၁၆၊ ၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Another one is Bolt (၂၀၀၈ ရုပ်ရှင်). What should the title be in Burmese? @Pho Sai:, do you know anything about this? 2600:1700:53F0:AD70:7943:AFDB:85F3:8F2F ၀၃:၂၆၊ ၁၄ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Would you mind giving some of your opinions in ဆွေးနွေးချက်:ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်? Editor in Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၅:၅၂၊ ၄ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Infobox country မှာ နိုင်ငံတော်တံဆိပ်နေရာ (|symbol_type) မှာကျ စာတန်းရေးပေးလို့ရသလို အလံနေရာ (|flag_type) မှာလည်း စာတန်းထိုးပေးလို့ရနိုင်အောင် လုပ်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျ။ Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၀၄:၂၀၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဟုတ် ရတယ်ဗျ။ enwiki ဖက်မှာတော့ ပါပြီးသား၊ ဒီဖက်က တမ်းပလိတ်က မြန်မာ/အင်္ဂလိပ် နှစ်မျိုးသုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတော့ update လုပ်ဖို့ တော်တော်လက်ဝင်တာ။ ထပ်ဖြည့်ဖို့/ပြင်ဖို့ လုပ်ရဦးမယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၂၆၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Albert Poliakoff စမ်းကြည့်ပါဦးဗျ။ ထည့်တော့ထားပြီ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၄၂၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Ninjastrikers စာတန်းပေါ်ပါတယ်ဗျ။ ကျေးဇူးပါ။Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၀၄:၅၀၊ ၁၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မင်္ဂလာပါ Bro မြန်မာ ပရိုဂရမ်မာ တစ်ယောက်အကြောင်း ရေးချင်လို့ပါ။ ကိုးကားကတော့ Google Play store Link တွေနဲ့ တခြား Website တွေမှာ တင်ထားတဲ့ app link တွေတော့ရှိပါတယ်။ ရေးလို့အဆင်ပြေမလားခင်ဗျ။ ဖျက်ခံရနိုင်လား။ ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပြုပေးပါလားခင်ဗျာ။ — Burmese Editor (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ ၁၅:၀၇၊ ၁၇ မတ် ၂၀၂၂‎
@Burmese Editor: ဝီကီပီးဒီးယားမှာ ထင်ရှားအရေးပါခြင်းကို သက်သေမပြနိုင်တဲ့၊ ထင်ရှားအရေးပါခြင်းမရှိတဲ့ အကြောင်းအရာများကို လွှင့်တင်ခြင်း မပြုတဲ့အတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အကြောင်း ရေးမယ်ဆိုရင် ထင်ရှားအရေးပါကြောင်း စိစစ်အတည်ပြုနိုင်တဲ့ ကိုးကားရင်းမြစ်တွေ ပါဝင်ဖို့ လိုပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၈:၄၅၊ ၁၇ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Google play store link https://play.google.com/store/apps/dev?id=8381686851933341019
ဒါက Programmer ရဲ့ Google Play Profile Link ပါ။
Programmmer ကျတော့အခြား Link တွေ ကိုးကားဖို့ကျတော့မလွယ်ကူဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျ။
အကြံလေးပေးပါအုံးဗျ။ Burmese Editor (ဆွေးနွေး) ၀၉:၄၇၊ ၁၇ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
စိစစ်အတည်ပြုနိုင်တဲ့ ကိုးကားရင်းမြစ်တွေဆိုတာ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ Eleven စတဲ့ အထင်ကရမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြထားတာမျိုးကို ပြောတာပါ။ အခုပြောပုံအရ ထင်ရှားအရေးပါမှုရှိတယ်လို့မမြင်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၅၈၊ ၁၇ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Programmer တွေကိုကျတော့ Bro ပြောသလို Media တွေက အရေးတယူ ဖော်ပြခြင်းမခံရပါဘူး။ ဒါကြောင့် Programmer တွေအတွက် Wiki မှာအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးလား။ များသောအားအားဖြင့် အနုပညာရှင်တွေအတွက်က လွယ်ပေမယ့် နည်းပညာရှင်တွေအတွက်ကျတော့ ခက်ခဲတယ်။ ‌ဖြေကြားပေးပါ သိချင်ပါတယ်။ Burmese Editor (ဆွေးနွေး) ၁၂:၀၂၊ ၁၇ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့သူဆိုရင် မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားက အကြောင်းအရာတွေကို လက်လွတ်စပယ်စုစည်းဖော်ပြထားတဲ့ နေရာမဟုတ်တာကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားမှုရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ လက်ခံပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၈:၄၈၊ ၁၇ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Ninja Striker ရဲ့အကြောင်းပြန်မှုများကို အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။U Aung Kyaw Htay (ဆွေးနွေး) ၀၅:၅၂၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Greetings! I was wondering if you could delete this revision because it'sacopyright violation:
Thanks! --魔琴 (ဆွေးနွေး) ၀၂:၄၃၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Done. Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၁၁၊ ၂၀ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Movement Strategy and Governance News – Issue 5[ပြင်ဆင်ရန်]
Xeno (WMF) (ဆွေးနွေး) ၀၄:၁၁၊ ၂၁ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
File:Flag of Naypyidaw Union Territory.svg[ပြင်ဆင်ရန်]
I'm just curious about which font did you use for the text "နေပြည်တော်ကောင်စီ". Could you tell me the name of the font? Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၁၀:၀၇၊ ၂၉ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Albert Poliakoff, I used "Myanmar Gantgaw" with stroke. There is alsoasimilar font named Myanmar Nayone. Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၁၉၊ ၂၉ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thanks, turns out I had also downloaded these fonts too. Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၁၀:၃၆၊ ၂၉ မတ် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Movement Strategy and Governance News – Issue 6[ပြင်ဆင်ရန်]
Thanks for reading. Xeno (WMF) ၀၂:၂၄၊ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အဆင်ပြေရင် "Infobox military rank" လုပ်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျ။ Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၀၄:၃၀၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဟုတ်ကဲ့။ လုပ်ထားလိုက်ပါမယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၃၄၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Albert Poliakoff တမ်းပလိတ်:Infobox military rank ကို လုပ်ထားပါတယ်။ ဘာသာပြန် အခေါ်အဝေါ် အဆင်မပြေတာရှိရင် ဝင်ပြင်ပေးသွားပါဦး။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၅၆၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thank you very much! Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၁၀:၅၀၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
For your diligent administration and maintenance for Myanmar Wikipedia! 🌐 Pho Sai®️ (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၇၊ ၂ ဇွန် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thank you! Ninja✮Strikers «☎» ၁၇:၅၄၊ ၂ ဇွန် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မြန်မာဝီကီရင်းမြစ်မှာကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ဝင်ရေးပေးထားပါတယ်။ နည်းဥပဒေများ ဆိုပြီး (sub)Category တစ်ခုလုပ်ပေးလို့ရမလားဗျ။Albert Poliakoff (မက်ဆေ့ခ်ျ) ၀၄:၁၇၊ ၅ ဇွန် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Albert Poliakoff ကဏ္ဍလုပ်တာက ဘယ်သူမဆို လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျ။ ထိပ်ဆုံးကဏ္ဍ oldwikisource:category:မြန်မာဘာသာ ထဲ အဆင့်ဆင့် ထည့်ပေးဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါဗျ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၄၂၊ ၅ ဇွန် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အရမ်းပြန်လိုချင်တယ်ပြန်ဖွက်ပေဘာနောတောင်းပန်ပါတယ် 1.46.133.19 ၁၄:၀၀၊ ၉ ဇွန် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Web application တခုအကြောင်း ရေးရင် ဘာတွေလိုအပ်မလဲခင်ဗျ။
ဘာသာရေး app ဖြစ်ပြီး လူသုံးတော့သိပ်မများသေးပါဘူး။ Burmese Editor (ဆွေးနွေး) ၀၅:၅၈၊ ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ထင်ရှားအရေးပါမှုလမ်းညွှန်ချက် အတိုင်းဖြစ်ရပါမယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၅၁၊ ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မင်္ဂလာပါ @Ninjastrikers, ကျွန်ုပ်၏ Wikipedia အသုံးပြုသူ စာမျက်နှာတွင် ကြော်ငြာနှင့်တူသော အကြောင်းအရာကို ပြုလုပ်မိသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ တောင်းပန်မှုကို လက်ခံပါ။ ထိုအမှားပြုလုပ်မှုက A Sure Myanmar ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှားမဟုတ်ပဲ သုံးစွဲသူရဲ့ အမှားဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဖိုးတန် Wikipedia အသုံးပြုသူတွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ A Sure Myanmar ကုမ္ပဏီအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကို ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ မေတ္တာရပ်ခံစာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး A Sure Myanmar အတွက် ကျွန်ုပ်၏ အချက်အလက်ပြည့်စုံသော User Page ကိုဖန်တီးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
A sure Myanmar (ဆွေးနွေး) ၁၀:၀၃၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Ninjastrikers&oldid=749759" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၂၊ ၁၀:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။